၂၀၂၀ မတိုင်မီက Citibank သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုသာသုံးစွဲလိုသည် အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
Citibank သည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က၎င်း၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၁၀၀% နှင့်ပြည့်စုံရန်ရည်မှန်းချက်ကိုကြေငြာခဲ့သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်၎င်း၏ကတိကဝတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, 2020 ခုနှစ်တွင်။
"ကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားလုံးရဲ့စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီးဆက်လက်ထောက်ပံ့နေပါတယ် ငွေကြေး ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စီမံကိန်းများအတွက်ဖြစ်သည်ဟု Citibank ၏စီအီးအိုမိုက်ကယ် Corbat ကပြောကြားခဲ့သည်။
5 အထွေထွေ motor
စွမ်းအင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်နှင့်၎င်း၏မဟာဗျူဟာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ထိရောက်မှုကိုအာရုံစိုက်ရန် Citi က၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် လုပ်ငန်းခွင်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ခရက်ဒစ်များကိုသင့်လျော်စွာအသုံးပြုခြင်းအပြင်ဒေတာစင်တာများကဲ့သို့သောအထူးကြပ်မတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများအတွက် ၀ ယ်ယူသည့်သဘောတူညီချက်များကိုဆောင်ရွက်ပါ။
ဤနည်းအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းသည်နယူးယောက်ရှိကမ္ဘာ့ဌာနချုပ်အသစ်ကိုတည်ဆောက်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ LEED ပလက်တီနမ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုရရှိရန်ရွေးချယ်ထားကြောင်း၊ ယူအက်စ်အေ၏အစိမ်းရောင်ဆောက်လုပ်ရေးကောင်စီ.
ထို့အပြင်တက္ကဆက်တွင်တည်ရှိသည့်၎င်း၏အဓိကဒေတာစင်တာတစ်ခုသည်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သောစွမ်းအင်ဖြင့် ၅၀% ဖြင့်အလုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ Green-e နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သောကြောင့် စျေးနှုန်းအတက်အကျကိုရှောင်ကြဉ်ပါ၊ သူတို့က 15 သို့မဟုတ် 20 နှစ်စာချုပ်များနှင့်အတူလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုဝယ်ကတည်းက။
Citi ၏နည်းပညာအရာရှိချုပ် Don Callahan ကပြောကြားရာတွင် "ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားရှိကျွန်ုပ်တို့၏အဆောက်အအုံများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်မိမိကိုယ်ကို ဆက်လက်၍ စိန်ခေါ်လျက်ရှိပါသည်" ထိုနည်းတူစွာပင် Citibank သည်ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည် အသစ်ကမဟာမိတ်ဖွဲ့ "ဒီရည်မှန်းချက်ကြီးရည်မှန်းချက်။ " ဖြည့်ဆည်းရန်
ကုမ္ပဏီမှရရှိသောအချက်အလက်များအရ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို ၂၅% တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ရေအသုံးပြုမှုကို ၂၀% လျှော့ချခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၏ ၆၁% ကိုလွှဲပြောင်းခြင်း၊ LEED အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့်အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းကို ၂ ဝ% တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော် Citibank သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းဆောင်နိုင်သော bandwagon ကိုစတင်ခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့အနက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
သင့်ရဲ့ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch နှင့် Apple TV ပစ္စည်းများနှင့်အတူဆန်းသစ်တီထွင်မှုလောကကို ဦး ဆောင်ပါ။ ကုမ္ပဏီသည် ၁၀၀% ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရှိသောနိုင်ငံ ၂၃ နိုင်ငံတွင်လည်ပတ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များမှလာသည် ၁၀၀% သို့ရောက်ရှိ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားကာဗွန်ပမာဏလျော့ကျစေခြင်းအားဖြင့် ၂၀၂၀ တွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးသန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်အသစ်4gigawatts တပ်ဆင်နိုင်ရန်လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေသည်။
၂၀၂၀ အတွက်မြောက်အမေရိကဘဏ်၏ရည်မှန်းချက်မှာပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အဖြစ်အသုံးပြုရန်စွမ်းအင် ၁၀၀% အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ဆိုလာပြားများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပြီးတက္ကဆက်ရှိ၎င်း၏ရုံးများရှိဒေတာစင်တာများတွင်လေစွမ်းအင်၏ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်လက်မှတ်များ (RECs) ကိုအသုံးပြုသည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်စုပေါင်းအားထုတ်မှုလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်များကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်နှင့်စိမ်းလန်းသောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုအသုံးချရင်းဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဒေါ်လာ ၁၂၅ ဘီလီယံသုံးစွဲရန်ကတိကဝတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်ဟုအဖွဲ့၏ကမ္ဘာ့ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဲလက်စ်လစ်တာမန်က RE125,000 site မှပြောကြားခဲ့သည်။
အချိုရည်ကုမ္ပဏီတွင်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောရည်မှန်းချက်ရှိသည်။ ၂၀၂၀ တွင် ၄ င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများ (ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အအေးခန်း) တွင်ကာဗွန်ဓာတ်လျော့ချခြင်းကိုလျှော့ချရန်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်လျှောက်လုံးထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်နေကြသည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုမှုသည်ဤပြောင်းလဲမှုနှင့်အနာဂတ်တွင်ကာဗွန်နိမ့်စီးပွားရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟု RE100 မှကုမ္ပဏီ၏စွမ်းအင်နှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာစတီယာရင်အဖွဲ့ကို ဦး ဆောင်သည့် Chris Childs ကရေးသားခဲ့သည်။
၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြင့်နိုင်ငံပေါင်း ၅၉ နိုင်ငံတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက် ၃၅၀ ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဤရည်မှန်းချက်သည်လျှပ်စစ်ယာဉ်များကိုတွန်းအားပေးခြင်းနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ချဉ်းကပ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် သင်၏စီးပွားရေးကိုအားကောင်းအောင်လုပ်ပါကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတိုးတက်ရန်နှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြေရှင်းရန်။
Whiskas နှင့် Pedigree ကဲ့သို့ M & M's၊ Snickers နှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစားအစာချောကလက်များအားပိုင်ရှင်ကလျှော့ချရန်အာရုံစိုက်သည်။ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ၎င်း၏ဆိုဒ်များသို့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အသုံးပြုသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏ ၁၀၀% သည် ၂၀၄၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများမှကင်းဝေးသွားရန်ဖြစ်သည်။
Nexus စွမ်းအင် အဆောက်အအုံများအကြားစုစုပေါင်းထောက်ပံ့ရေးအချက် ၂,၃၉၈ ခုကို Bankia သို့ ၁၀၀% ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရရှိမည်ဖြစ်သည် ရုံးချုပ်များနှင့်အကိုင်းအခက်များနှစ်စဉ်သုံးစွဲမှုသည် ၈၇ GWh ထက်ရှိသည်။ Nexus Energíaသည်စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာအဆင့်တွင်ပြိုင်ဆိုင်မှုအရှိဆုံးကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့သည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အရာမှာ Bankia ဌာနချုပ်နှင့်ဌာနခွဲများအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်အရေးကြီးသည် ဘဏ်သို့ငွေစုဆောင်းခြင်း။ ထို့အပြင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကိုရှာဖွေရန် supply point တစ်ခုစီအားပြည့်စုံသောလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
El Corte အင်္ဂလိပ် ၎င်း၏ထက်ပို 4% လျှော့ချခဲ့သည် စားသုံးမှု လျှပ်စစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းဤကိန်းဂဏန်းသည် ၂၀၀၈ တွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။
ဖြန့်ဖြူးရေးကုမ္ပဏီကြီးအတွက်၎င်းသည်၎င်း၏စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ထိရောက်သောစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲသည် မဟာဗျူဟာများ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပိုကောင်းအောင်ရန်ဖြစ်ပါသည် စားသုံးမှု လျှပ်စစ် အလင်းရောင်၊ စီးပွားဖြစ်အအေးခန်း၊ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်နှင့်လေအေးပေးစက်ကို ဦး စားပေးသည်။
ချမှတ်ထားသောဆောင်ရွက်ချက်များအနက်အုပ်စုသည်စျေးဝယ်စင်တာများ၏အလင်းရောင်ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူ၎င်း၏အစီအစဉ်ကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည် အယ်လ်အီးဒီနီးပါး 160.000 luminaires အစားထိုး။
စီးပွားဖြစ်အအေးမိခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အအေးနှင့်အေးခဲနေသောထုတ်ကုန်များနှင့်အတူပရိဘောဂများတံခါးများကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သော အမြင်၏အချက်အနေဖြင့် စွမ်းအင်.
CaixaBank သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုမှရရှိသောCO₂ထုတ်လွှတ်မှုများကိုထေမိစေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သောViñales (ချီလီ) ရှိဇီဝလောင်စာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတည်ထောင်ရန်ကူညီခဲ့သည်။ သင်၏ကာဗွန်ပမာဏကိုတွက်ချက်ခြင်းနှင့်အထောက်အကူပြုမည့်စီမံကိန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်း ကြားဖူးတယ် CaixaBank သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကတိကဝတ်များကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်သည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » ၂၀၂၀ မတိုင်မီက Citibank သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုသာသုံးစွဲလိုသည်